Barcelona Iyo Inter Milan Oo Barbaro Ku Heshiiyay + Natiijada Kulamada Kale Ee Laga Dheelay UCL
Barcelona iyo Inter Milan oo wada qaatay kulan ciyaareed muhiim ah ayaa waxay ku kala baxeen natiijo dhan 1-1, inkasta oo ay Bluagrana goolka ku horeysay. Malcom ayaa dhaliyey daqiiqadii 83aad, balse waxaa ka bareejeeyay Icardi daqiiqadii…
Ernesto Valverde Oo Ka Hadlay Hadii Uu Leo Messi Kusoo Bilaabayo Kulanka Inter Milan Ee UCL
Abdirahman	 Nov 6, 2018
Ernesto Valverde, ayaa sheegay inay suuragal ay tahay in Lionel Messi, uu kusoo bilowdo kulanka ay caawa ka dheelayaan Champions League, kaasi oo ay wajahayaan kooxda Talyaaniga ka dhisan ee Inter Milan. Dheesha dhex-mareysa naadiyaddani…
Tababaraha Inter Milan Oo Fariin Hanjabaad Ah U Diray Barcelona Kahor Kulanka Caawa Ee UCL
Luciano Spalletti maamulaha naadiga Inter Milan ayaa sheegay in kooxdiisa ay xusul-duub ugeli doonto sidii ay dhagaha ugu dhufan lahayd Barcelona, kuwaasi oo ay ka horjeedaan ciyaar ka tirsan Champions League. Camaaliqada horyaalka dalka…
Hordhac: Inter Milan v Barcelona – Labada Koox Oo Champions League Ku Kulmaya Markii Sideedaad
Kooxda Talyaaniga ka dhisan ayaa soo dhawayn doonta dhigeeda reer Spain si ay uwada dheelaan kulan ka tirsan heerka Group-yadda ee tartanka xiisaha iyo xamaasada badan ee Champions League. Dheeshani oo ah lugta labaad, waxaa tii koowaad oo…